Embraer 120ER Brasilia PAD DOWNLOAD FSX - Rikoooo
downloads ရယူရန္ 13 261
အပြည့်အဝအထုပ် ဘို့ FSX ပြင်သစ်လေကြောင်း (ဒေသဆိုင်ရာ), ယူနိုက်တက် Express, USAir Express ကို (သမိုင်း), Canarias ပြည်နယ်: (မော်ဒယ်ကို virtual cockpit နဲ့အသံ) လေးခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်တကွကြွလာ။ ဒီအထုပ်ထဲတွင်ပါဝင်သောကို manual ဖတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါ Embraer 120 Brasilia ဆောပိုလို၏နိုင်ငံတော်အတွက်စဝ်ဟိုဆေး dos Campos အတွက် Embraer ကထုတ်လုပ် 30 ထိုင်ခုံနှင့်အတူအမွှာတာဘိုပရော့လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာနှစ်ဦးတာဘိုင် PW118B Pratt & Whitney ခြင်း, ရိုးတံမှာအသီးအသီးပို့ဆောင် 1,800 မြင်းကောင်ရေအားဖွငျ့ powered ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ Cruise မြန်နှုန်း 300 မိုင် (555 တစ်နာရီမိုင်) ခန့်နှင့်အပြည့်အဝဝန်မှာ 800 nm ၏အကွာအဝေး (1,481 ကီလိုမီတာ) ရှိတယ်။ ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးမျက်နှာကြက် 32,000 ပေ (9,754 မီတာ) ဖြစ်ပါသည် RVSM ခွဲခြားမရပေမယ့်, သူကဥရောပတိုက်တွင် 29,000 ခြေကိုကန့်သတ်ထားသည်။
350 ကျော်ကဒီလေယာဉ်ပျံ၏မိတ္တူကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အများအပြားကဥရောပလေကြောင်းလိုင်းဥရောပအတွင်းဆက်ဆံရေးရုံးလေယာဉ်ပျံ (လေ Littoral, DAT, DLT, Excel, ဒေသဆိုင်ရာ, အတ္တလန္တိတ် Air ကိုကူညီစောင့်ရှောက်ရေး) အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သူကရွေးကောက်ပွဲစီမံရေးအဖွဲ့ဟူသည် 135 ဖြင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည်။
Embraer 135 hop! ပြင်သစ်လေကြောင်းများအတွက် FSX & P3D
Embraer ရွေးကောက်ပွဲစီမံရေးအဖွဲ့ဟူသည်-120, Mega Pack ကို FSX & P3D
Embraer ရွေးကောက်ပွဲစီမံရေးအဖွဲ့ဟူသည်-110 Bandeirante FSX & P3D & FS9 3.0